ကျောင်းသူမလေးရဲ့ ရမ္မက်စိန်ခေါ်သံ – Grab Love Story
ဇီးဖြူတောင် (အ.ထ.က) ကျောင်းမှ
ကျောင်းသားများအတွက် သာယာ ဖွယ် ထွက်ပေါ် လာတဲ့ ကျောင်းလွှတ် ခေါင်းလောင်းသံ ပါ။
ဇီးဖြူ တောင် ရွာ အဝင် ဝ မှ ကျောင်း ဆိုင်းဘုတ်ကြီး က ရွာ ကို ဝင်လာမည့် မည်သူ့ကို မဆိုကြိုဆိုလျှက်။
သည်ရွာ ၏ ကျက်သရေဂုဏ် ဆောင် များစွာ ထဲ မှ ဤကျောင်းသည်လည်း တစ်ခု အပါဝင် မဟုတ်ပါတကား…..
တရွေ့ရွေ့ ထွက် သွားနေကြ သော ကျောင်းသားများကို ကြည့်ရင်း ဦးညီအောင် သက်မလေး ချလိုက်မိသည်။
ဤကျောင်းကို သူ ကျောင်းအုပ်အဖြင့် ရောက်ရှိနေသည်မှာ
၁၀ စုနှစ် တစ်ခုနှင့် တစ်ဝက်ကိုပင်ကျော်လာပြီးဖြစ်သည်။
ရောက်ခါစက စည်းကမ်းပိုင်းဖရိုဖရဲ နှင့် ပညာရေး နိမ့်ကျလှသော ဒီကျောင်း ကို ဦးညီအောင်မနည်း ပြုပြင် ခဲ့ရသည်။
အနစ်နာခံမှု များစွာနှင့် ရွာသူ ရွာသား တို့ ကို စည်းရုံးခြင်းများစွာ ဖြင့် အဘက်ဘက်မှ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရသည်။
အသက်က ၄၂ အရွယ်…
မိန်းမ ရှိခဲ့ ဖူးသည်။ သုံးလလောက်သာ ပေါင်းသင်းပြီး အကြောင်းအရင်း တိတိကျကျ မသိ နှစ်ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းခဲ့ကြသည်။
ရုပ်ရည်က ခန့်သည်။ စည်းကမ်းပိုင်းတော့ ခု ကျောင်းအုပ်ဘဝ မပြောနှင့် ..
ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း တွေက ပင် ကျောင်းသားဘဝ က သူ့ အနောက်ကနေ လိုက်ခဲ့ရသည်။
ကျောင်းဝင်းအတွင်း တွင် အဆောင်လေး တစ်ခုမှာ လွတ်လပ်သူ မို့ အေးဆေးနေသည်။
ကျူရှင် ကတော့ စာသင်ဆောင် တစ်ခု မှာ သင်သည်။ ကျူရှင် မသင်ပေးလို့လည်း မရ။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေ စာ ပိုနားလည်းနိုင် ဖို့ ပါ။
ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသူ တစ်ယောက်ကို ဦးညီအောင် အိပ်ဆောင်မှ တွေ့လိုက်တော့ အံ့သြသွားသည်။
ဒိကောင်မလေးက ဘယ်တုန်းကမှ ကျူရှင် စောခဲ့ သည်လို့ မရှိခဲ့…အမြဲတမ်း ဦးညီအောင် ဆူနေခဲ့ရတဲ့
ခု တလော လပိုင်းလောက်သာရှိမည် ထင်သည်။
ကျူရှင်ချိန် မှန် မှန် ရောက် လာတတ်တာ။
ဒိနေ့ တော့ ထူထူးခြားခြား စော နေခြင်းသာ။ ဒါကြောင့်မို့ ဦးညီအောင် အံ့သြရခြင်းပါ။
ကျူရှင် သင်နေကျ အဆောင်အရှေ့ မှာ …
စွပ်ကျယ်လေး စွပ်ထည့် လို့ လှမ်းကြည့် လိုက်သည်ပင်
ထို ကောင်မလေး ရပ်စောင့်နေဆဲ….
ဒိနေ့ “ကျူရှင် မရှိဘူးလေ…ကလေးမ”
ဆရာကြီး ဆိုသူ လှမ်း အပြောကို သဇင် နားထောင်ရင်း ရင်ထဲ မှာ မဲ့ ပြုံး ပြုံး လိုက်သည်။
ဒိနေ့ ကျူရှင် မရှိမှန်း သဇင် သိတာပဲ လေ…..
ခါတိုင်းအပတ်တွေ တော့ ဒိနေ့မျိုး ကျူရှင် က ရှိနေကျပါ။
မနက်ဖြန် မြို့ တက်ပြီး ပညာရေးမှုးရုံး သွားစရာ ရှိ လို့ ဦး ညီအောင် နှစ်ရက်စလုံး ကျူရှင်ကို ပိတ်
ထားကြောင်း မနေ့ကတည်းက ၁၀တန်း
ကျောင်း သား အားလုံးကို အသိပေးထားပြီး ဖြစ်သည်။
သဇင် မဝံ့မရဲ ဟန်နှင့် ဦးညီအောင်အား ကြည့် လိုက်သည်။ ပြီးတော့..”
ကျူရှင်ပိတ်ထားမှန်း သမီးသိပါတယ် ဆျာ…”
သမီးနားမလည်းတဲ့ ပုစ္ဆာ လေးတွေ မေးမလို့ပါ။”
အော် အေအေ…အာ့ဆိုလည်း အဆောင်ထဲ ဝင် လေ”
ရော့ သော့ ..”
တွေ့ပြီးပေါ့ ….ဆရာ ကြီး ဦး ညီအောင် ရယ်…”
ရင်ထဲ မှာ ပြောလိုက်သော စကား “
အဆောင် သေ့ာ့ကို ဖွင့်နေသည့် အနီရောင် စကတ် အတို ။ အနီရောင် လက်ပြတ် ဝတ်ထားသောသဇင် နောက် ကျောပြင်ကို ဦးညီအောင်
အဓိပ္ပါယ်မဲ့ တချက် ကြည့် လိုက်သည်။
နောက်ဖေးပေါက်မှ မေမေ့ ခေါ်သံ ကို ကြားလိုက်သည်နှင့် သဇင် ပြန်ထူးရင်း ဖုန်း ကစားနေရာမှ အမြန် ထလိုက်သည်။
ကျူရှင်သွားတော့ လေ သမီး’
စား ကြိုးစားစမ်းဘာသမီး ရယ်…”
တစ်ချိန်ကုန် ဖုန်း ဖုန်း” နဲ့ ပဲ ပြီးနေလို့ မနှစ်ကလည်း ၁၀ တန်းကျပြီးပြီး မဟုတ်လား….
သဇင် မေမေ့ကို မငြင်း ချင်တော့ပါ။
သွားသွား မြန်မြန် ‘”
မောင်မောင် လာ ခေါ် တော့မယ်..”
မောင် မောင် ။ပိစိ။ အေးပုံ။ သဇင်
ဒါက သဇင်တို့ တစ်တွဲတွဲ ငယ်ပေါင်းကြီးဖေါ် တွေလေ.
မောင်မောင်ကတော့ သဇင်ကို တိတ်သူခိုး ချစ်နေသူ။
သဇင် မသိစရာ မရှိ ။ အူဝဲ ဆိုကတည်းက တူတူပေါင်းလာသူ။သူ ဘယ်နေ့ ဖွင့် ပြောမလဲ..
ပြောတာနဲ့ သဇင်က ငါလည်းနင့်ကိုချစ်ပါတယ်လို့ဖြေပေးပြီးသား။
နှစ်ယောက်စလုံး အပြင်မှာ ရပ်နေကြစမ်း..”
စာသင်ခန်းထဲသို့ လှမ်းဝင်မည့် မောင်မောင်နှင့် သင်းသဇင် တို့ နှစ်ဦးစလုံး ခြေလှမ်းတွေ ရပ်တန့်သွားသည်။
ဆရာကြီး၏ အမိန့်ကို သူတို့ မလွန်ဆန်ရဲ။ ဒါကဓမ္မတာ ပါ။ ဆရာ့ အမိန့် ကို ဘယ်တပည့်မှ မလွန်ဆန် ဝံ့။
ွ “” ငါခေါ်မှ ဝင်လာခဲ့ကြ” ” ဒိအတိုင်းပဲ လက်ပိုက်ရပ်နေ”
ဒိကလေးနှစ် ယောက် ဒါမှ မဟုတ် သူတို့ လေး ယောက် က အမြဲ တမ်း ကျူရှင် လာ နောက်ကျ တတ်မှန်း ဦညီအောင်သိသည်။
မပြောခဲ့။ ခုဟာက တစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်တော့ ။စည်းကမ်းပျက်လွန်းသည်။ ဒိတစ်ခါတော့ အပစ်ပေးမည်ဟု ဦးညီအောင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားပြီးပြီး ဖြစ်သည်။ ကျန်နှစ်ယောက်ကတော့ ဒိနေ့ အချိန်မှန် ကျူရှင် ရောက်နေတော့ လွှတ်သွားသည်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ လည်း သဘောပေါက်သွားလိမ့်မည်။
အချိန်တို့ တဖြေးဖြေးသာ ကုန်သွားနေသည်။ဆရာကြီး ခုထိ သဇင် တို့ ကို အခန်းထဲ ပေးမဝင်။ မောင်မောင်က ခေါင်းလေးငိုက်လို့ လက်ပိုက်ပြီး ဒိအတိုင်းရပ်နေသည်။
သဇင် ခြေထောက် ညောင်းတာထက် အခန်းတွင်းမှ ကျောင်းသားတစ်ချို့ အသံတိတ် လှောင်ပြောင်ပြနေတာက ပို ခံရခက်သည်။ ရှက်လို့ ဖြူဝင်းနေတဲ့ မျက်နာတလျှောက် နီးမြန်းလာသည်။
ဆရာကြီး ဦးညီအောင် မိမိကို အရှက်ခွဲ နေသည်။
အလွန်ကို မုန်းတီးမိသည်။ ဆရာ ဆိုတဲ့ အတွေးကို ထုတ်ပစ် လိုက်မိသည်။
ပါးပြင်မှ မျက်ရည်တို့ တဖြိုက်ဖြိုက် ဆင်းလာသည်။
ညနေက အတော်စောင်းလို့ ကျူရှင်ချိန်ပင် ပြီးဆုံးသွားပြီး။ အခန်းတွင်းမှ ကျောင်းသား များ ထွက်လာတိုင်း သဇင်ကို အထင်သေးတဲ့ မျက်နှာ ထားနှင့် ကြည့်ကာ ထွက်သွားနေသည်။
အခန်းတွင်း ဆရာကြီး တစ်ယောက်တာကျန်တော့သည်။
ဦးညီအောင် ဒိကလေးနှစ်ယေက်ကို မခေါ် သေး။
နောက်ထပ်အသစ်တက်မည့် သင်ခန်းစာ ကို ဆက် ကြည့်နေလိုက်သည်။
သဇင် ဒူးများပင် တုန်လာသည် ထိအောင်….ညောင်းလာပြီး။ အသားတို့ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်ထိအောင် အမုန်းစိတ်နှင့် ဒေါသတို့ ထွက်လာသည်။
သဇင် က မောင်မောင် လက်ကို ဆွဲ၍ လှည့် ထွက်ဖို့
ွ ” ဘယ်လဲ ကလေးမ”” နောက်တစ်ခါ ဘယ်တော့မှ ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကျူရှင် ဖြစ်ဖြစ် နောက်မကျ စေနဲ့”
ကဲ အိမ် ပြန်တော့…
သဇင် မောင်မောင် လက်ကို စွဲ ပြီး ပြေးထွက်သွားသည်။ ဒိနေ့ကို သဇင် ဘယ်တော့မှ မမေ့ ။မေ့လည်း မမေ့နိုင်ပါ။ မိမိကို အရှက်ခွဲ ခဲ့ သော ဆရာကြီးဦးညီအောင်လည်း အရှက် ကွဲ စေရ မည်။
သင်းသဇင် သည် အငြိုးပေါင်းများစွာဖြင့် ဆရာဟူသော အသိ လုံးဝ ပျောက်ကွယ် ခဲ့ ပြီး ဖြစ်သည်။ ဦးညီအောင်၏ စေတနာနှင့် ဆရာ မေတ္တာကို အထင်လွဲ မြင်ကာ အမုန်းပွဲ ဆင်ဖို့ အချိန်တွေကိုသာ စောင့်လို့ သာနေတော့သည်။
သုံးလ…ဆိုသော အချိန်တို့သည် တရိပ်ရိပ် ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်
ဦးညီအောင် အပေါ် ထားသော သင်းသဇင် ၏ အငြိုး တို့က လုံးဝ မပျောက်။ မချေ ပ မရမချင်း ထပ်တိုးလို့သာနေသည်။ ဒါပေမယ့် သဇင် ကျောင်းနှင့် ကျူရှင် ချိန် လုံးဝ နောက်မကျ တော့ပါ။
သဇင် အရှက်ကွဲ သလိုမျိုး ဦးညီအောင် အရှက်ကွဲ ဖို့ အကြောင်းက ဖြစ်လာခဲ့ပြီး လို့ သဇင် သိလိုက်ပြီး။
သဇင်က အရှက်သာ ကွဲ ခဲ့ တာ ..
ခု ဆရာ ဦညီအောင် အကျိုး ပါနည်းစေရမည်။
သဇင် အဆောင်တံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ နာရီ ကို ကြည့်လိုက်သည်။ ညနေ..၅း၁၅
မောင်မောင် ကို မှာခဲ့ သည်က…
ပေစိ တို့ကိုပါ ကျူရှင် ရှိကြောင်း ပြော၍ ၅း၃၀ ကျောင်းကို အရောက်လာရန် ပေါ့။
မိမိ အကြံနှင့် မိမိမို့ တစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်။
ဆရာ ဦးညီအောင် အတွက် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျသွားစေရမည် ။ မတတ်နိုင် သူ လုပ်ခဲ့တာလေ သဇင်ကို အရှက်ခွဲ ခဲ့ တာလေ……
အပ်ကျသံပင် ကြား ရလောက် အောင်တိတ်ဆိတ်နေသော အဆောင်ခန်းထဲသို့ဦးညီအောင် ချောင်းဟန့် သံဖြင့် ဖြိုခွဲ ရင်းလှမ်းဝင် လိုက်သည်။
အဆောင် ပြတင်းပေါက်တစ်ခု ဖွင့်ထားတာက လွဲလို့ ထူးခြားမှု ဘာမှ မရှိ။ ပြတင်းပေါက်နှင့် အနီးဆုံးစားပွဲ တွင် ထိုင်ကာ ပေါင် အရင်း ပေါ် တော့မတတ် ရောက် နေတဲ့ သဇင် ရဲ့ စကတ် အစ…
ဖြူဖွေး ၍ တုတ်ခိုင် တဲ့ သဇင်ရဲ့ ပေါင်တံနှစ်ချောင်းက
သာမာန် ယောကျားလေးတစ်ယောက် သူ့ အရှေ့ ဒူးထောက် ခ စား ပေးလိုက် မိချင်မည်။ လိင်စိတ် ကို စွဲဆောင် စေတဲ့ ပေါင်တံ အလှ….
ဦးညီအောင် ရင်ထဲ တစ်မျိုး တော့ဖြစ်သွား သည်။ ဆရာ ဆိုတဲ့ အသိ ကို ချက်ချင်း စိတ်ထဲ သွင်း လိုက်သည်။ မသိသလို နေလိုက်သည်။
လက်ပြတ် ဝတ်ထားသည်မို့ လက်ပြင် အောက် ဂျိုင်း ကွင်းမှ အတွင်း ဘော် လီ ကို တန်းမြင်နေရ သည်။
ကဲ သမီး သဇင် ” ” ဘယ်အပုဒ် ကို နားမလည်းတာလဲ ဆရာ ကို ပြပါဦး”
ဒိ အပုဒ် ပါဆရာ” ဟု ပြောရင်း မတ်တပ်ရပ်ကာ ခါး လေး ကို သဇင် က ညွှတ် ချ ပေးလိုက်တော့ တစ်ပေ သာသာ အကွာ မှာ သာ ရှိနေတဲ့ ဦးညီ အောင် အတွက် မျက်လုံး လွဲ ချင်စရာ…
ခါးညွှတ်ချလိုက်သည်နှင့် အကျီ င်္ လည်ဝိုက်မှ တဆင့် အတွင်း ဘော်လီ ဖြင့် မလောက် လို့ လျှံထွက်နေတဲ့ သဇင့်ရင်းသား အစုံ။
ဦညီအောင် သဇင် ကို တစ်ချက် ကြည့်လိုက်သည်…သဇင်က မသိသလို နေလိုက်သည်။ သဇင် ဆီမှ ကိုယ်သင်းနှံ တစ်ချို့ က ဦညီအောင် စိတ်ကို တစ်မျိုးဖြစ်စေလိုက်သည်။
ပုဒ် စာ တစ်ပုဒ် ကို ဦးညီအောင် စိတ်ရှည်စွာ ရှင်းပြနေသည်။
ပတ်ဝန်ကျင်သည် ငှက် သံတစ်ချို့ မှ အပ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်။
ကျောင်းဝင်းနှင့် အဆောင် သည် အတော်တန် ဝေးသည်။ လိင်မတူ သူစိမ်း ယောကျားလေးနှင့် မိန်းကလေး နှစ်ယောက် ထဲသာ ရှိသော ကမ္ဘာ်ဘ်ဘ လေး
တစ်ခု အလား ဖြစ်နေသည်။
ပုထုစဉ် တွေ ရဲ့ စိတ်ဖေါက် ပြန် ချင်စရာ အကောင်းဆုံးနေရာ နှင့် အချိန်။
ဒီအတိုင်း ကိုဟ ထားသော သဇင် ရင်သား အစုံက ဦးညီအောင် စိတ်ကို ဆွ ပေးနေသည်။ သို့ သော် ဦးညီအောင်သည် ဆရာ ဖြစ်သည်နှင့် အညီစိတ်တို့ကို အနိုင်နိုင်ထိန်းထားသည်။
သဇင် ရုတ်တရက် ထရပ် လိုက်သည်။
ဦးညီအောင် ဆီ ဘာမပြော ညာမပြော တိုးကပ် လိုက်သည်။
ခဏနေ မောင်မောင်တို့ ရောက်လာတော့ မည်။ တစ်ချက်မဲ့ပြုံး နှင့် အတူ..
မိမိ ရင်သားနှင့် အတွေ့ထူး ရ အောင် ဦးညီအောင်ကို ပြေးဖက်ပစ်လိုက်သည်။
သဇင် ဒါဘာလုပ် လုပ်…
အို …ဆရာ ….
သမီး လေ….
ဦညီအောင် ရုန်းထွက် သည် မရ။
သဇင် ရင်သားအိညက်ညက်အရသာ တို့ က လည်း သူ့ ကို လိင်စိတ် နိုးကြွ နေစေပြီး။
ငါက ဆရာပါလား ဆိုတဲ့ အသိ ပင်ပျောက်ချင်နေပြီး။ဒ
ိကလေးမ ဘာစိတ်ရိူင်း ဝင် နေသည်လည်းမသိ။
သဇင် က သူ့ အတွေးနှင့် အတူ အဆောင် တံခါးပေါက်ကို ကြည့်ကြည့်နေသည်။
ဦးညီအောင် ကို အတင်းဖက်ထားရင်း….
ဟု တတွတ်တွတ် မြည်းတမ်းရင်း …
မောင်မောင်တို့ အလာကို မျော်နေမိသည်။
မောင်မောင် ! ဟေ့ မောင် မောင်
မနက်က ချစ်ရပါသော သူငယ်ချင်း သဇင်မှ ကျူရှင် ရှိပါသည် ဟု လာပြောသွားသည်။
ပေစိ နှင့် ဂျမ်းပုံ ကိုပါဝင်ခေါ် ခဲ့ရန် အတန်တန် မှာသွားသည်။ ခု လည်း လွယ်အိတ်ကို လွယ် ကာ ပေစိကို ဝင်ခေါ် မည်ဟုဆုံးဖြတ်၍ အိမ်ပေါ် မှ ဆင်းရုံရှိသေး
ခုလို ဦး ဖိုးထူး မှ အပြေးအလွှား လာခေါ် ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟာ မင်း အဖေ ငါ့ အိမ်မှာ ငါနှင့် စကားပြောရင်း မူးလှဲ လို့ ကွ ! အမြန်လိုက်ခဲ့…
မောင် မောင် လာသင့်ပြီး။
သဇင် ရည်ရွယ်ချက်တို့ အောင်မြင်ပြီးလေ။ ဦးညီအောင် အရှက်တွေကွဲလို့ အကျိုး နည်းပြီး။
သဇင် ပါးစပ် က အော်နေပေမယ့် …တစ်ခု သတိထားမိတာက ….ဆရာ ဦးညီအောင် အစတုန်းကလို မျိုး သဇင် အတင်း ဖက်ထား တာကို လုံးဝရုန်းကန်းခြင်းမလုပ်တော့ပါ။
လုံး ဝ ငြိမ်သက်နေပြီး။
သဇင် တစ်ချက် မော့ကြည့် လိုက်သည်။
တကယ် ထိတ်လန့် သွားသူက သဇင်ပါ။ဘာကြောင့်လဲ…သဇင် သိသွားပြီး…
ဆရာ့ ရဲ့ တည်ကြည်တဲ့ မျက်နှာဟာ ရာဂ စိတ်တို့ ပြည့်နက်နေပြီး ဆိုတာပေါ့။
ဆတ်ကနဲ့ သဇင်ကို သူ့ အားနဲ့ ပွေ့ ချည်ပြီး စာရေးခုံပေါ် ချီတင် လိုက်တယ်….
သဇင် ခုမှ ထိတ်လန့် သွား မိပြီး ..
မောင်မောင် ရယ် အမြန် လာပါတော့ လို့ သာ ရင်ထဲ တမ်းတမိပြီး။
အခု မှ ရုန်းကန်မိသူ က သဇင်ပါ။
လွှတ်…”ခုလွှတ်နော် ဆရာ ဦး ညီအောင်.. “
လွှတ်ပါလို့ ရင် ထဲက တကယ် အော်ရင်း ရှိသမျှ အင်းအားနှင့် သဇင် ရုန်းထွက် သည်။ မရ ဘူး
ဆရာ ရင်အုံကြီးကို သဇင် အတင်း ထု ပြစ်တယ်…
လွှတ် နော် ဆရာ..”
ဆရာ ဆီ က ဘာအသံမှ ထွက်မလာ တော့ပါ။
သူ့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်တော့မည် ထင်သည်။
ဒါကြောင့် သဇင် ထပ်အော် ဖို့ ပြင်လိုက်သည်။
အော်လို့ မရတော့ဘူး။ ဆရာ့ နုတ်ခမ်းထူထူ ကြီးက သဇင့် နုတ်ခမ်းပါးပါး လေးကို ပြုတ်ထွက်လုမတတ် စုပ်ယူ ပစ်နေပြီး။
အောင်အောင်ရယ် နင်တို့ တွေ ခုထိ ဘာလို့ မလာသေးတာလဲ…လာပါတော့လားကွယ်။
စွပ်ကျယ်ကို စုတ်ဖြဲ ပစ်မတတ် ရုန်းကန်းနေသော တပည့်မလေး သဇင်..သိသိသာသာ ငြိမ်ကျ သွားမှန်း ဦးညီအောင် သိနေသည်။
မတတ်နိုင်ပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ငြိမ်သက်နေသော ရာဂစိတ် ကို ..ဒင်း က ဘာကြောင့်ရယ် မသိ လာစွ သည်။
မိမိ စိတ်ကို အမျိုးမျိုး ထိမ်း ခဲ့ပေမယ့် ဒီကလေး ကို က
ဦးညီအောင် ရဲ့ လိင်စိတ် တို့ နိုးကြားစရာ ဖြစ်အောင် အရာရာ ပြည်စုံသူလေး….ဒါကြောင့် ထကြွ ခဲ့ ပြီး။
မှားတယ် မှန်တယ် ကို နောက်မှ ဆုံဖြတ်ချင် မိတော့သည်။
ဦးညီအောင် ဒိကလေးရဲ့ နုတ်ခမ်းအစုံ ကို ရှိသမျှ အားနှင့် စုပ်ယူ ပစ်လိုက်သည်။
လျှာခြင်း ထိတွေ့ မိတ်ဆက် ကာ ကလေး ရဲ့ လျှာကို ပတ်ခွေ ရစ် မိပြီး။
တစ်ချက်လူးလွန့် မှုနှင့် အတူ ဒိကလေးကပါ ကိုယ့်လျှာကို သဘောတူ ပြန် ရစ်ပတ် နေတော့ ဦးညီအောင်စိတ်က တရွေ့ရွေ့ အထွပ်ထိတ် ဆီ သို့
သဇင့် လက်ပြတ် အကျီင်္ လေးက ဦးညီအောင် ၏ ချွတ်ချ မှု ကို ပိုင်ရှင် က သဇင် မှန်းသိပေမယ့် ငြင်းဆန်မရဲပဲ အလိုက်သင့် မြေခ ပေးလိုက်ရသည်။
၁၀ တန်းကျောင်းသူလေး သဇင့် ရင်သား အစုံက ဘော်လီ အပြင်ဘက်ကို ထွက်ကာ ဦးညီအောင်ကို စိန်ခေါ် နေသလား အောက်မေ့ရသည်။
သဇင့် ခန္တာ မှာ အကျီ င်္ မရှိတော့ မှန်း သဇင်သိ ပေမယ့်…ဆရာ ကို မလွန်ဆန် ချင်တော့ပါ။ သဇင့် ခန္တာ မှာ ဆရာ စွဲ မက် စရာ ဘာရှိ သလဲ..ရှိသမျှ ဆရာ့ကို ပစ်ကျွေး ချင် မိပြီး။ ဆရာ လုပ်သမျှ သဇင် သာယာ မိ ချင်မိပြီး။
သဇင် ဘယ်ယောကျားင်္ လေးနှင့် မှ အပေါင်းအသင်း လုပ်ဖူးသည် အထိတွေ့ မရှိဖူးပါ။ ဒါ ကိုယ့် သစ္စာ ပါ။
ဆရာ ပြု သမျှ တိုင်း သဇင် လေ..သဇင် ရှိသမျှ မွှေညင်းတို့ သူ့ နေရာနှင့် သူ တဏှာ စိတ်တို့ က လက်ခံပေးနေသလိုလို…
ဘော်လီ ကလစ်ချိတ် ဖြုတ်သံ
စာရေး စားပွဲ ပေါ် မှာ ပက်လက်အနေထားနှင့် ဆရာ က သဇင့် ဘော်လီကို ချွတ်လိုက် သည်။
ဖူးပေမယ့် မပွင့်သေးသည့် ပန်းအလား ဖြစ်နေတဲ့ သဇင့် ရင်သား အစုံ ကို ဆရာ ရဲ့ နုတ်ခမ်း ကြမ်းကြမ်း တွေက နေရာ အနှံ့ နမ်းရှုတ်နေတာ က သဇင့် ရဲ့ အင်္ဂါ ဇတ် ရဲ့ အကြော အမျှင်တွေကို နိုးဆွ နေ လိုက်တာ…
သဇင့် ရဲ့ မအာ သေးတဲ့ နို့သီး လေးတွေ ကို လာစုပ်ယူ လှဲ့ပါလား လို့ တောင်း ဆိုချင်ပေမယ့် ..
ဆရာက သူ့လျှာ လေးကို သဇင့် ရဲ့ နို့သီး အနားတဝိုက် ကို သာ ဘယ်ညာ မရွေး သူ့အထာနှင့် သူ စုပ်ယူ နေ တာ…
ဦးညီအောင်စိတ်တို့ သည် တဏှာရာဂ ၏ စေခိုင်းရာ အတိုင်းလိုက်ကနေ သည်။
ဒိလို ပန်းအဖူး မျိုး မနမ်းဖူးတာ အမှန်ပါ။
ရမ္မက်ဇော ကြီးစွာဖြင့် စာရေးစားပွဲ ပေါ် ပက်လက်အနေအထားဖြစ်နေသော သဇင့် စကတ် တိုလေးကို ဖတ်ကနဲ့ လှန် တင်လိုက်သည်။
အစိုကွက်လေးတွေ ဖြစ်နေသော သဇင့် အတွင်းခံ ဘောင်ဘီ ကို အသာယာ စွဲ ချွတ်ပြီး ဖြူဖွေးနေတဲ့ ပေါင်တံ နှစ်ချောင်းကို မိမိပုခုံးနှစ်ခု ကြားထဲ ထည့် လိုက် ကာ နုတ်ခမ်း ကြမ်းကြီးက ခြေဖျား မှ ပေါင်အရင်းကို သွားရာ လမ်း တလျှောက် မထိ တထိလေး ပွတ်တိုက်ရင်း သဇင့် ကာမအရှိန်ကို မြင့်တင် ပေးလိုက်သည်။
အဖူးလေး မိသဇင် သူ့ ပေါင်တံနှစ်ချောင်းက မိမိ ခေါင်းကို ညှပ်ဖြတ် လိုက်မတတ် ဖြစ်ညှစ်ပေမယ့် ..သူ့ တန်ဆာ နားကို နုတ်ခမ်းရဲ့ အနမ်း ရောက် ချိန်မှာတော့
ပေါင်တံ ညစ်အား အရှိန် က သုည အောက်သို့ ရောက် ရှိသွားပြီး။
လှပလိုက်တဲ့ တန်ဆာ။ မို့ဖေါင်းနေပြီး မည်သူ့ ကိုမှ ဝင်ခွင့် မပြု ထားဖူး သည့်အလား တည်ရှိနေသည်။
တံခါးချပ် သဖွယ် သဇင့် တန်ဆာဝ ကို ဦးညီအောင်ရဲ့ လျှာစောင်းက စတင် ခေါက် ချလိုက်သည်။
ညည်းသံနှင့်အတူ မိမိခေါင်းကို တစ်ချက် တွန်းထုတ်ပေမယ့် လက်ကို ပြန်ဖယ်လိုက်ပုံက မိမိဘာလုပ်မလဲ ဆက်ခံစားကြည့်တော့မည့် သဘောမှန်း ဦးညီအောင် ရိပ်စားမိသည်။
ဒါကြောင့် နှစ်သက် စရာ သဇင့် တန်ဆာဝ ကို ခပ်မြန်မြန်လေး လျှာ စောင်းလေးဖြင့် ထက်အောက် လုပ်လျှား ပေးလိုက်မိသညါ။
အဖူး ငုံလေး တံခါးသဏ္ဌန် သဇင့် တန်ဆာဝက ဦးညီအောင် လျှာ ကြမ်း ခေါက်သံ ကို မခံနိုင် အရည်တို့ အဖြိုင်ဖြိုင် စီးကျ လာသည်။
ငါးရံ့ တစ်ကောင်အလား စာရေးခုံပေါ် လူးလွန့်နေသောသဇင်။ မောင်မောင်တို့ မလာပါစေနဲ့ တော့လို့ ပင် ဆုတောင်းနေမိပြီး။ ဦးညီအောင်ပေးနေသော အတွေ့ သည် ဘာနှင့်မျှ မလှဲ နိုင် အစားထိုမပေးနိုင်သော အတွေ့ မှန်း သူ ခံစားမိသည်။
ဦးညီအောင် သဇင့် တစ်ကိုယ်လုံးကို နမ်းရှိုက်ရင်း လုံချည်ကို ချွတ်ချလိုက်သည်။
တောင့်တင်းနေသော လိင်တံ ကြီးက သဇင့် တန်ဆာနှင့် မမျှ။
မှိုပွင့် ကြီးက သာမာန် လိင်တံ တွေထက်သိသိသာသာ ကြီးနေသည်။ အတော်အတန် ရှည်းလျားပြီး ယောကျာင်္း တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အသွေးမှီ လိင်တံ ကို ဦးညီအောင် ပိုင်ဆိုင်ထားသည် မဟုတ်ပါလား။
သဇင့် တန်ဆာ အနားသားတို့ ရှုတ်ချီ ပွချီနှင့် တစ်ခုခု ကို သဘာဝ အရ တောင်းဆို နေမှန်း ဦးညီအောင်သိသည်။ ဒိအချိန်မျိုး မှာ မိမိ လိင်တံ ကိုပဲ မဟုတ်လား။
မိမိလိင်ံ တံ ခေါင်းကြီးဖြင့် မဝံ့ မရဲ ကာမအရှိန်ကြောင့် အပြင်ကို ထွက် လာတဲ့ သဇင့် အင်္ဂါ စေ့ကို ဦးညီအောင် ဖိ၍ ပွတ်တိုက် ချလိုက်သည်။
သဇင် အထိမ်းကွပ် မဲ့ ညည်းနေမိတာပါ။
သဇင် ဆရာကို အငြိုးကြီးခဲ့ ပေမယ့် ခုတော့ ..ဟို..
အထင်ကြီးစွာ ချစ်လိုက်မိပြီး။ ထူးကဲစွာ ဆရာ့ လုပ်ရပ်ကို သဇင် မမေ့နိုင်တော့ လို့ပါ။
ဆရာကို အတင်းဖက်ထားချင်ပေမယ့် သဇင် မထချင်ဘူး။ ဆက်မျောနေချင်မိတယ်..ဆရာဘာဆက်လုပ်ဦးမှာလဲ.,
ဘာအရသာတွေများ ထပ်ပေးလိမ့်မလဲ လို့ ပဲ သဇင် စောင့်မျော်နေမိတော့တယ်။ ဒါက သဇင့် ရင်ထဲက စကားပါ။
အင်္ဂါ နှင့်တန်ဆာဝ တို့ ဦးညီအောင်၏ လိင်တံခေါင်းဖြင့် ပွတ်တိုက်မှု အကြိမ်ကြိမ်ကြောင့် ဖူးနေသော ပန်း ..ပွင့်လာသည့် အလား သဇင့် တန်ဆာတံခါးဝ တို့ က ဧည့်သည် ကို ဖိတ်ခေါ် လိုက် ပြီး ဖြစ်သည်။ ရွဲ ဆင်းလာသော သဇင့် တန်ဆာနုတ်ခမ်းဝ တို့ သက်သေ ပေးနေပြီးလေ….
ညည်းသံ လောက်ကို အံတု ပစ်၍ ဂရုမစိုက်သော ငှက်တစ်ချို့ လှန့် ပျံ ပြေးထွက်သွားကြသည်။
ဦးညီအောင် ၏ လိင်တံ ခေါင်း သည် သဇင်၏ အပျိုစင် ဘဝ ကို ရိုက်ချိုး လိုက်သည့် အလား မတရား နေရာတစ်ဝက်ခန့် ဝင်ယူ လိုက်သည်။
သဇင် ရုတ်တရက် လုံးဝ ထိတ်လန့် စွာ အော်မိ ခြင်း ဖြစ်သည်။
သဇင့် တန်ဆာ ဝ မှ ထွက်လာသော အရည် တစ်ချို့ ကို ပြန်လည် အထဲ သို့ တွန်းယူသွားသော ဦးညီအောင်၏ လိင်တံခေါင်း ဒဏ် ကို သဇင် မခံနိုင်။
သဇင် နာ တယ်..”.
အေးပါ ကလေးရယ်” ဆရာ ဖြည်းဖြည်း ထည့်ပါ့မယ်..”
နောက်ထပ် ပို နေသော သဇင့်ယောနိဝ အလွှတ် ကို ဦးညီအောင်…လိင်တံ က ထပ်ထည့်၍ နေရာ အပြည့် ယူလိုက် သည်။
အံကျိတ် လိုက်မိသည်က သဇင့်ပါ။
ကျိန်းဖိန်၍ သွားသော သဇင့် ယောနိပြွန်မှ ခံစားချက်က
သဇင့် ခေါင်းဘေးက ဆရာ့ လက်ကို ဖမ်းကိုင်လိုက်မိသည် အထိပါ။
သွေးစိမ်းတို့ အဖိန်းဖိန်း ထွက်လာသည်။ ဦးညီအောင်အဖို့ ကာမစိတ်က ပိုလို့ တောင် တက်ကြွ လာသည်။
ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်တိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ ပေမယ့် ဖြူစွတ်နေသော သဇင့် ခန္တာ ကိုယ် အလှ ကြောင့် ရမ္မက် ဇော တို့ ထကြွလာခဲ့ တာက ဦးညီအောင်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ရှိသမျှ မိမိလိင်တံ အတိုင်း သဇင့် တန်ဆာ ထဲ ကို အရှိန် အဟုန်နှင့် အပြည့်အဝ ရိုက်သွင်းပစ်ပလိုက်သည်။
ဆရာ ကို ထားတဲ့ အငြိုး တွေ သဇင် မေ့ပြစ်မိပြီး ဆရာ….
ဆရာကို သဇင် အရမ်း မြတ်နိုးမိပြီး..ဖေါက်
ဆီးစပ် ရိုက်သံနှင့် စာရေး ခုံ တို့ အသံသာ အဆောင်အတွင်း ကြားနေရသည်။
နှစ်ဦးသား ကာမ အရှိန် တို့ သည် စည်းချက်ညီစွာ
ခံ စား နေကြသည်။
အောင်အောင် သည်လည်း သဇင့်ဆီ လာနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
သဇင် သည်လည်း အောင်အောင်ကို မမျော်လင့် တော့ပါ။
ကာမရသ အရှိန်က ရှိသမျှ အကြောအမျှင်တွေကြား
နှစ်ဦးသား စီဆင်းလျှက် ရှိနေကြသည်။
ပုခုံးနှစ်ဘက်ပေါ် တင်ထားသော သဇင့် ခြေထောက် တစ်ဖက်ကို ဖြုတ်ချပြီး ခွေချလိုက် ကာ လက်ဖြင့် ထိမ်းထား လိုက်ပြီး ရှိသမျှ အားနှင့် သူ့ တန်ဆာကို အရှိန်နှင့် ခပ်ဆတ်ဆတ် စောင့် ထည့် လိုက်သည်။
နှစ်ချီနေသော သုတ်ရည် တို့ က သဇင်ဆိုသော တပည့်မလေး တန်ဆာ ထဲ ကို အရှိန်အဟုန်နှင့် ဝင်ရန် အဆင့်သင့် ဖြစ်နေခဲ့ပြီး။
ဇတ်ရှိန်တို့ မြင်တက်လာခြင်းနှင့် အညီ ဦးညီအောင်
လှုပ်ရှားမူတို့ က မြင့်သထက် မြင့်တက် လာသည်။
သဇင့် တန်ဆာလည်း ကျိန်းဖိန်း လို့ နေပြီး ဖြစ်သည်။
မှိုပွင့် သဏ္ဌန် ဦးညီအောင် ၏ လိင်တံသည်လည်း သုတ်လွှတ်ရန် သုတ်ကြော တစ်လျောက် နေရာ ယူထားနှင့်ပြီး ဖြစ်သည်။
သဇင် က ဆရာ နှုးသမျှ နု နေရပြီး။
ရှိသမျှ ဆရာ့ အပေါ် အငြိုး များ ပျောက်ကွယ်လို့ ဆရာကို ချစ်စိတ်က နေရာဝင်ယူ လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။
ဆရာ ကို သဇင် ဖက် ချင်ပြီး ။ မြတ်နိုးချင်ပြီး။
ဒါကြောင့် သဇင် တန်ဆာ ထဲ ဆရာ အတင်း ရိုက်သွင်းနေတဲ့ ရိုက်ချက်တွေကို ခံစားရင်း ဆရာ ကို သဇင် ထဖက်လိုက်မိတယ်..
ဖေါက် ဖေါက် ဖေါက် ဖေါက် ဖေါက် ဖေါက်
ရှိန်းတိန်တိန် နဲ့ အတူ ပူးကနဲ့ ခံစားလိုက် ရချိန်မှာ သဇင် ချစ်သော ဆရာ အသံ က သူ တစ်ခုခု ခံစား လိုက်ရ ပါတယ် ဆိုတဲ့ သဘော ကိုပြတဲ့ အသံ ကို သဇင် ကြား လိုက်ရတယ်….
ရှိသမျှ သုတ်ရည်တို့ သဇင် ယောနိပြွန် တွေ ကို ဆရာ ထုတ်ပစ် လိုက် ပြီးမှန်းသဇင် သိလိုက်သည်။
သဇင် တစ်ကိုယ် လုံး ဓတ်လိုက်သွားသလား အောက်မေ့ရအောင် တုန်ခါသွား သည်။
သဇင် လက်လွှတ်မခံနိုင်တော့မတတ် ဆရာ ကို ဖက်ထားလိုက်သည်။
သဇင် ရဲ့ ဖူး နေသော ပန်းကို ဆရာ ပွင့် လိုက်ပေမယ့် အပြစ်မမြင်တော့သည့် အပြင် ပို၍ သာ ချစ်သွား တော့သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောလာမည့် အပစ် အကောင်း မှန်သမျှ ဒီအချိန် ဒီအခါ ဒီ အခြေနေ ကို သဇင် ထည့်မတွက် ချင်တော့ ပါ။
ငြိမ်သက်နေသော ဆရာ ကို သဇင် အလိုက်သင့် ဖက်ရင်း
သဇင်ကိုယ် ပိုင်စိတ်ရင်းက ဆရာရဲ့ ရှိန်းဖိန်းဖိန်း သုတ်ရည် အရ သာ လေးကို ခံစား နေမိတော့တယ်..
၁၀ တန်းအောင်စာရင်း ထွက်သည့်နေ့တွင် ဆရာ နှင့် သဇင်တို့၏ မဂ်လာပွဲအား မောင်မောင် ရင်နာစွာဖြင့် ငေးကြည့်ရင်း